फोहोरबाट मोहर बनाउने अभियान शुरू
कौसीमा मासिक रू. ५० करोडको तरकारी उत्पादन
कास्की । पोखरा महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका घरहरूमा उत्पादन हुने फोहोरलाई वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्न अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । महानगरले ‘छुट्याऔं फोहोर, बनाऔं मोहर’ नारासहित पहिलो चरणमा १० ओटा वडामा अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।
पहिलो चरणमा महानगरका वडाहरू १, ५, ८, १०, १३, १६, १७, १९, २६ र २७ मा यो अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । अभियान सञ्चालन गर्न पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला र सम्बन्धित क्षेत्रलाई समेटेर १४८ सदस्यीय मुल समिति गठन गरिएको छ ।
उक्त समितिको बिहीवार बसेकोे बैठकमा अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विभिन्न सुझाव संकलन गरिएको महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले बताए । अन्तक्र्रियासहितको बैठकमा महानगर प्रमुख जीसीले घरमा उत्पादन हुने फोहोरलाई ३ प्रकारले वर्गीकरण गरी संकलन गरेर व्यवस्थापनमा अभिप्रेरित गरिने बताए ।
उनले घरमा उत्पादित फोहोरमध्ये कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल तथा इनर्जी उत्पादनमा प्रेरित गर्दै कौसीखेती वा करेसाबारीमा सदुपयोग गर्न अभियानले सघाउने बताए । यस्तै पुनः प्रयोग हुने फोहोरलाई विक्री गरी आम्दानी गर्ने र फाल्नै पर्ने फोहोरलाई छुट्टै संकलन गरी महानगरले व्यवस्था गरेअनुसार विसर्जन गर्न अभियानले प्रोत्साहन गर्ने बताए ।
बिहीवार भएको बैठकले फोहोर वर्गीकरण मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गर्ने, घर–घरमा ३ प्रकारका फोहोरको वर्गीकरण गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका संकलन प्रक्रियालाई यथास्थितिमा नै आगामी ४ महीनासम्म निरन्तरता दिने, ४ महीना भित्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारणलगायत मापदण्ड निर्माण गरी स्वकृतिका लागि महानगरमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अभियानलाई क्रमशः सबै वडामा विस्तार गर्ने र वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रत्येक वडामा मुल समिति र सचिवालय समिति गठन गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले अभियालनलाई समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेकपा कास्कीका अध्यक्ष तथा गण्डी प्रदेश सांसद कृष्ण थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा पार्टीले बनाएको घोषणापत्रमा सरसफाइ विषयलाई समेटेकाले यो अभियानलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताए ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सचेतक रामराज लामिछानेले पोखराको फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगरले ल्याएको अभियानमा समर्थन जनाउँदै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेशबहादुर ढकालले फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अभियान सान्दर्भिक भएकाले पूर्ण सहयोग रहने बताए ।
बैठकमा सहरी योजना आयोगका सदस्य सरोज कोइरालाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पोखरामा दैनिक १८२ टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ८० प्रतिशत घरायसी फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । कोइरालाले पोखराको क्षेत्र ठूलो भएकाले भेग हेरेर तीन ठाउँमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्नु पर्ने अध्ययनले देखाएको बताए ।
पोखरा महानपालिका कृषि महाशाखाका प्रमुख मनहर कडरियाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पोखरा महानगरका करीब १ लाख ५० हजार घरमा कौसीखेती गर्दा मासिक करीब रू. ५० करोड सम्मको तरकारी फलाउन सकिने बताए । घरबाट निस्किने कुहिने फोहोरलाई मल बनाएर कौसीखेती गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशको करीब ६४ प्रतिशत खर्च[२०७७ सावन, ११]
दोबिल्लाको पुल र बस्ती जोखिममा[२०७७ सावन, ७]
पोखरा लेखनाथमा गण्डकीको पहिलो ‘संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल’[२०७७ सावन, २]
पर्वत अस्पतालमा डायलासिस सेवा शुरू[२०७७ सावन, २१]
पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको हाहाकार[२०७७ सावन, २१]
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रहरीलाई सवारीसाधन सहयोग[२०७७ सावन, २०]
बेनी अस्पतालमा निःशुल्क डायलासिस सेवा शुरू[२०७७ सावन, २०]